अर्थ /विकास – Simple Khabar
Category: अर्थ /विकास
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार ऋण
काठमान्डौ २९, चैत । नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको छ । यो बर्षबाट एक नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको हो । महालेखा प्रतिवेदनले नेपालीहरुको ऋणको भार बढेको देखाएको छ । […]
जापानमा नेपालीलाई रोजगारी खुल्दै, को-को जान पाउछ ? कहाँ गर्नुपर्छ काम हेर्नुहोस पुरा बिबरण
अप्रिल २०१९ सालदेखि लागू हुने गरी जापानमा नयाँ ‘स्पेसिफाइड स्किल्स’ भिसा दिने भनिएको छ । नेपाली कामदारले पनि जापानमा काम गर्न पाउने भएका छन् । जापान सरकारको विदेशी कामदार लिने विषय महत्वकांक्षी मानिएको छ । […]
Banner News अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ /विकास समाचारLeaveacomment
प्रदेश सरकारलाई पहिलो बजेट : कुन प्रदेशले कति पाए ?
On May 29, 2018 By simplekhabar
प्रदेश सरकारलाई पहिलो बजेट : कुन प्रदेशले कति पाए ? – १५ जेठ, काठमाडौं । संघीयताको अभ्यासमा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले सातै प्रदेशलाई छुट्याएको बजेटको विश्लेषण हुन बाँकी छ । कतिपयले प्रदेशलाई कम बजेट […]
Banner News अर्थ /विकासLeaveacomment
आयो सरकारी कर्मचारीलाई दुखद खबर: पेन्सनले खारेज गर्ने ओली सरकारको अन्तिम तयारी
On March 31, 2018 By simplekhabar
काठमाडौँ । ओली सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यसको सट्टामा नयाँ प्याकेज बनाएर पेन्सन हटाउने तयारी भएको हो । सरकारले राज्यलाई दिर्घकालिन भार पर्ने धेरै कुरा काँट छाँट गरिरहेको छ […]
नेपाल पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ भनि हेर्नुहोस आजका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर यस्तो छ,(माघ ०६/जनवरी २०)
On January 20, 2018 January 22, 2018 By simplekhabar
काठमाडौं, माग ०६ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ १६ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ […]
अर्थ /विकास समाचारLeaveacomment
पुल निर्माणकाे लागि माग ७७ अर्ब निकासा तीन अर्ब,पुल निर्माणमा बजेटकाे अभाब
On January 13, 2018 By simplekhabar
२९ पुस, काठमाडौं । बजेट अभावका कारण देशभर निर्माणाधीन ९०० भन्दा बढी पुल समयमै सम्पन्न गर्न समस्या खडा भएको छ । चालु आवमा सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाअन्तर्गत तीन अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर […]
मजदूरकोलागि आयो यस्तो खुशीको खबर ! प्रधानमन्त्रीले गरे मजदुरका पक्षमा यस्तो प्रस्ताव
On January 1, 2018 By simplekhabar
पुस १६, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदूरको न्युनतम मासिक ज्याला १५ हजार तोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आज यहाँ ‘चौथो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन’को उद्घाटन […]
श्रीमतीलाइ केटासंग नग्न अवस्थामा भेट्दा केटाकै अगाडी दुबैलाई नांगै बनाएर एसरी गरे राम धुलाई (भिडियोसहित) (12,354)
विदेश जाने क्रममा श्रीमतीले चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति गर्न दिए यस्तो उपहार (9,373)
कतै हजुर पनि पर्नुभयो कि ?चाहेर मात्रै धनी बन्न सकिँदैन,यी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन् !जानी राखौ (5,876)
यस्तो रहेछ राधिकाले गाई काट्न पाउनु पर्छ भन्नुको कारण (5,775)
खाडीमा घरेलु महिला हरुलाई आफ्नो मालिक बाट यस्तो बलात्कारको सिकार हेर्नुस् भिडियो सेयर गरि सहयोग गरौं (3,907)